श्रम स्वीकृति लिनै सास्ती, ८ दिनसम्म धाऊँदा पनि बन्दैन श्रम स्वीकृति ! - Jagaran Post
श्रम स्वीकृति लिनै सास्ती, ८ दिनसम्म धाऊँदा पनि बन्दैन श्रम स्वीकृति !
जागरणपोस्ट १४ मंसिर २०७६, शनिबार १०:२६
काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा श्रम स्वीकृति लिन आउने सेवाग्राहीले भोग्ने सास्ती अझै अन्त्य भएको छैन । अहिले पनि श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीलाई आठ दिनसम्म नै श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने सास्ती उस्तै छ । यस्तै समस्याको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, उपत्यकाबाहिरका मिलन नेपाली ।
श्रम स्वीकृतिका लागि गएको बिहीबारदेखि निरन्तर धाउँदा बल्ल बिहीबार आठ दिनमा श्रम स्वीकृति लिएको उहाँले बताउनुभयो । मिलन पहिलो पटक यस्तो स्वीकृति लिएर माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ ।
समाचारमा सुने वा पढेजस्तो एक दिनमै सहज रूपमा श्रम स्वीकृति पाउने अवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति उहाँले आक्रोश पनि पोख्नुभयो । “श्रम स्वीकृतिका लागि के के कागजात चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुँदा आठ दिन लाग्यो तर बल्ल बल्ल स्वीकृतिचाहिँ पाएँ”, बिहीबार बिहान ४ बजे अँध्यारोमै श्रम कार्यालय पुगेको बताउने मिलनले भन्नुभयो ।
मिलन त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ । श्रम कार्यालयमा कुन देश जाँदा के कस्ता कागजात चाहिन्छ भन्ने जानकारी दिने सूचना डेस्क वा बोर्ड भएको भए मिलनजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यस्तो सस्ती भोग्नुपर्ने थिएन कि । नयाँलाई मात्रै होइन, पुराना वा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेका लागि पनि यस्तै सास्ती छ । अहिले त पुरानो राहदानी तथा सम्झौतापत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले एक दिनमा हुने काममा चार दिन धाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।